घरमा कमिलाको ताँती आएको छ भने नमार्नुहोस,यस्ता संकेत र भाग्य मेट्दै हुनुहुन्छ ! – Online Khabar 24
घरमा कमिला आउने जाने गरेको देख्नुभएको छ भने यसले केही संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ ।
ज्योतिषका अनुसार घरमा कमिला आउनु भनेको जीवनमा हुने परिवर्तनको संकेत हो ।यदि घरमा कालो कमिलाको आवत जावत हुने गरेको छ भने यसले भाग्योदयको संकेत गर्छ ।
कालो कमिला आउदा आर्थिक समृद्धि हुनुको साथै सुख मिल्ने बताईन्छ ।त्यस्तै घरमा रातो कमिला आवत जावत गर्छ भने त्यसले घरमा केही अशुभ हुने र परिवारमा तनाव बढ्ने संकेत गर्दछ ।
घरमा कमिला आउने जाने गरेको देख्नुभएको छ भने यसले केही संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ । ज्योतिषका अनुसार घरमा कमिला आउनु भनेको जीवनमा हुने परिवर्तनको संकेत हो ।यदि घरमा कालो कमिलाको आवत जावत हुने गरेको छ भने यसले भाग्योदयको संकेत गर्छ ।
यदि राशीमा शनि दोष छ भने कमिलालाई चनाको रोटीमा चिनी मिसाएर दिदा शुभ हुन्छ । यस्तै राहुको दशा चलिरहेको छ भने कमिलालाई चिनी दिदा शुभ हुन्छ ।यदि तपाईको सुर्य कमजोर छ भने आईतबारको दिन कमिलालाई खिर बनाएर दिदा शुभ हुन्छ ।
यदि कुण्डलीमा पितृ दोष छ भने कमिलालाई अमावस्यको समयमा आफुले खाने खानेकुराको केही अंश कमिलालाई खुवाउनुपर्छ ।गृह दोष दुर गर्नको लागि कमिलाई गुलियो रोटी खुवाउद शुभ हुन्छ । साथै लक्ष्मी पनि खुसी हुन्छिन् ।यसैगरी सपनामा कमिला देख्दा धन लाभ हुने बताईन्छ ।
तर अधिक मात्रामा कमिला देखे जीवनमा चिन्ता बढ्ने संकेत गरेको मानिन्छ ।घरमा आएको कमिलालाई मार्नु दुर्भाग्य हुने समेत ज्योतिषमा बताईएको छ । यस्तै यो पनि पुरा खबर,
यो पनि पढौ : के तपाई पर्समा यी चीजहरु राख्नु हुन्छ ? त्यसो भए तुरुन्तै हटाउनुहोस्, नत्र हुन्छ धन हानि – पर्स एक यस्तो छरितो र सजिलो चिज हो । जसलाई प्रायः सबैले आफ्ना महत्वपूर्ण कागजात देखि लिएर पैसा राख्न प्रयोग गर्ने गर्छन् । पर्समा पैसा वाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण चीजहरू राख्दा कहिले कहिँ नकारात्मक शक्तिले वास गर्ने वास्तु नियममा उल्लेख गरिएको छ।
पर्समा के राख्नु हुँदैन – १. चावी वा साँचो – अधिकांश व्यक्तिहरु आफ्नो पर्समा साँचो राख्छन्। तर वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा साँचो राख्नु शुभ मानिदैन। पर्समा कुनै पनि प्रकारको धातुले नकारात्मक ऊर्जालाई आकर्षित गर्छ र यसले धन हानि हुने प्रवल सम्भावना बढेर जाने मान्यता छ।
२. मृ’त परिवारजनको फोटो – पर्सको मुख्य काम भनेको पैसा राख्नु हो। र यसलाई देवी लक्ष्मीको वासस्थान पनि भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा मृ’त परिवारजन वा कोही मृ’तकको तस्बिर राख्नु भनेको अशुभ मानिन्छ। त्यसैले, आफ्नो पर्सबाट मृ’त व्यक्तिको फोटोलाई तुरुन्तै हटाउनुहोस्। पर्समा यस्ता चीजहरूले नका’रात्मक उर्जा निम्त्याउँछ।
५. देवीदेवताहरूको तस्बिर – प्रायःजसो मानिसहरुले पर्समा देवीदेवताहरूको तस्वीरहरु राख्ने गर्छन्। तर वास्तुको नियमअनुसार त्यस्ता तस्बिरहरु पर्समा राख्नु हुँदैन। पर्समा भगवानका यन्त्रहरु राख्न सकिन्छ । तर देवीदेवताहरूको तस्बिर राख्नु नहुने वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। साभार गरियको खबर ।
Prevयि राशी हुनेहरू अाज निकै सतर्क हुनुहोला ! साथै हेर्नुस अाजको राशीफल
nextमोटरसाइकलमा हिडीरहेका थिए १८ वर्षीय यी युवती र ३४ वर्षीय युवक, यो देखेर प्रहरी पनि छक्क परे !